राजदूतको ‘मानव तस्करी’ धन्दा : सरकारले किन ‘एक्सन’ लिएन ? बर्खास्त गर्न माग – www.agnijwala.com
राजदूतको ‘मानव तस्करी’ धन्दा : सरकारले किन ‘एक्सन’ लिएन ? बर्खास्त गर्न माग
काठमाडौं- अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पामाथि ‘मानव तस्करी’को आरोप लागेको विषय अहिले चर्चामा छ ।
नेपाली राजदूतावास क्यानबारामा चालकको काम गरेका ओङ्छु शेर्पाले राजदूत लक्की र उनका पतिले विदेश पठाइदिने भन्दै रकम असुल्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । राजदूत दम्पतीबाट आफू पीडित भएको शेर्पाले बताएका छन् ।
राजदूतमाथि गम्भीर खालको आरोप लागेको, देशकै प्रतिष्ठामाथि आँच आउने अवस्था आएकाले नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले आरोपलाई गम्भीर र संवेदनशील रुपमा लिनुपर्ने हो । तर, गम्भीर आरोपको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षणसम्म सार्वजनिक भएको छैन । बरु राजदूत शेर्पाको बचाउ गर्दै दूतावासले नै विज्ञप्ति जारी गर्ने काम गरिरहेको छ ।
कसरी ठगिए ओङ्छु शेर्पा ?
लक्की राजदूत हुनुअघि नै ओङ्छु शेर्पा उनका पतिको सम्पर्कमा थिए । उनका पतिले अमेरिका पठाइदिने भन्दै २२ लाख रुपैयाँ लिएका थिए ।
गाउँकै एक जनालाई अमेरिका पठाएकाले विश्वास २२ लाख रुपैयाँ दिएको पीडित ओङ्छु शेर्पाले बताएका छन् । त्यसपछि पनि १०–१० लाख गरेर २ पटक थप रकम दिइएको उनले बताए । अमेरिका पठाइदिने भन्दै पीडित शेर्पाले कूल ४२ लाख रुपैयाँ दिए ।
तर राजदूत दम्पतीले ओङ्छु शेर्पालाई अमेरिका पठाउन सकेनन् । उनले अमेरिकाको भिसाका लागी दर्खास्त दिएपनि उनको भिषा भने लागेन् र अमेरिका पठाउन नसकिरहेकै बेला लक्की शेर्पा राजदूत बन्ने चर्चा चल्यो ।
त्यसपछि ओङ्छु शेर्पालाई पनि दूतावासमै काम गराउने गरी अस्ट्रेलिया लैजाने सहमति भयो । त्यसपछि शेर्पाले दूतावासमै चालकको काम गरे । राजदूत भएपछि शेर्पाले चर्काे रकम लिएर नेपालीलाई अस्ट्रेलिया पठाउने धन्दा शुरू गरेको ओङ्छु शेर्पाको आरोप छ ।
आफूले दिएको पैसा ओङ्छु शेर्पाले फिर्ता माग्न थालेपछि राजदूत दम्पतीले चोरीको आरोप लगाएको र शेर्पाकी पत्नीलाई मुद्दा लगाएर थुनामा पठाएको पीडित शेर्पाको दाबी छ । ओङ्छु शेर्पाकी पत्नी अहिले पनि प्रहरीको थुनामै रहेकी छन् । राजदूतको चक्करमा परेर ओङ्छु शेर्पा परिवार अहिले नराम्ररी फसेको तथा शक्ति र पैसाको आँडमा राजदूत दम्पतीले मनपरी गरिरहेको दाबी गरिएको छ ।
ओङ्छु शेर्पाले राजदूत शेर्पामाथि लगाएको आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि नभएपनि आरोप छानबिनको विषय चाहिँ हो । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । राजदूतमाथि सार्वजनिक रुपमै आरोप लागिसकेपछि सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण भएर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ । राजदूत एउटा व्यक्ति मात्रै नभएर देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको पद हो ।
मानव तस्करीबाट आएको पैसाबाट राजदूत शेर्पाले काठमाडौंको नयाँपाटीमा दुई रोपनी जग्गा खरिद गरेको दाबी गरिएको छ । ओङ्छु शेर्पाले राजदूतले खरिद गरेको जग्गाको कागजपत्र र तिरेको पैसा आफूसँग रहेको बताएका छन् । ओङ्छुले उक्त घरको कम्पाउण्ड समेत निशुल्क बनाइदिएका छन् ।
राजदूत शेर्पाले कारोबार आफूमार्फत् गर्ने गरेकालाई थप समस्यामा परेको ओङ्छु शेर्पाले बताएका छन् ।
ओङ्छु शेर्पामार्फत् सिंगापुरका तेम्वा शेर्पाका भाई दावा शेर्पालाई अस्ट्रेलिया लैजाने भनेर १४ लाख रुपियाँ राजदूत लक्की शेर्पाले लिएको दाबी गरिएको छ । राजदूत शेर्पाले ५–६ जनाबाट अस्ट्रेलिया लैजान रकम उठाएको आरोप छ ।
पूर्वमाओवादीका विदेश विभाग सचिव युवराज चौलागाईले समेत सामाजिक सञ्जालमा स्टेटस लेख्दै राजदूतका कामले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको शीर झुकेको बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘राजदूत मुलुकको दूत हो । नेपालका एक राजदूतका बारेमा मानव तस्करीको संगीन आरोप लागेको छ, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु मुलुकको शीर झुकेको छ । नेकपाको समेत सिफारिसमा त्यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेको व्यक्तिबाट त्यसखालको आपत्तिजनक काम भएको सुन्दा हामी लज्जित भएका छौं । नेकपा र नेपाल सरकारले यस परिघटनालाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिई छानबिन गर्नुपर्छ र पदको दुरुपयोग गर्नेमाथि कडा कारवाही गर्नुपर्दछ ।’